Somaliland: Amb. Axmed Xasan Cigaal oo isbarbar-dhig ku sameeyey taariikhda labada murrashax Madaxweyne ee KULMIYE iyo WADDANI, mar uu khudbad ka jeediyey xaflad xisbiga KULMIYE u qabtay taageerayaal reer Burco ah. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Amb. Axmed Xasan Cigaal oo isbarbar-dhig ku sameeyey taariikhda labada murrashax...
Amb. Axmed Xasan Cigaal oo isbarbar-dhig ku sameeyey taariikhda labada murrashax Madaxweyne ee KULMIYE iyo WADDANI, mar uu khudbad ka jeediyey xaflad xisbiga KULMIYE u qabtay taageerayaal reer Burco ah.
Wargane Tv: ” Waxa aynu kala dooranaynaa run iyo been ” Wasiir Xaglatoosiye